Yuusuf Garaad “Ninkii Ku Gefa Somalia, Inaan u Jawaabno waxaa ka Fiican…” |
Yuusuf Garaad “Ninkii Ku Gefa Somalia, Inaan u Jawaabno waxaa ka Fiican…”
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Somalia Yuusuf Garaad Cumar ayaa ku baaqay in laga fiirsado go’aanada la gaadho oo Somalia waxyeeli kara.
Qoraal u muuqday mid uu si gaar ah u taabanayay hadalkii Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, balse aanu xusin ayuu sheegay in mas’uul kasta oo wax aan wanaagsaneyn ka sheega Somalia aanay muhiim aheyn in loo jawaabo.
“Mas’uul wax aan wanaagsaneyn ka sheega Somalia in aan u jawaabno waxaa ka muhiimsan in aan dalkeenna wax wanaagsan u qabanno oo wax un aan ku biirinno horumarkiisa, Haddii aynan taa karin, ugu yaraan waa in aan ka fiirsanno kana dhowrsanno wax kasta oo waxyeeli kara Soomaaliya” ayuu yiri Yuusuf Garaad.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in jiraan dalal aan laheyn dowlado, oo Soomaaliya ka mid ah, waxaana hadalkan uu noqday hadal heynta ugu badan ee baraha bulshada ku wada xiriirto Somalida.
Durba waxaa soo baxay shakiyo laga qabo in dowladda Somalia ay qaadato go’aan aan la ogeyn saameynta uu keeni karo, waxaana dad badan oo Diblomaasiyiin ah ku taliyeen in laga fiirsado go’aan xilligan ay gaarto dowladda Soomaaliya.
Uganda ayaa ah dalka ugu badan ee Ciidamada ka jooga Somalia, kana hoos shaqeeya Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, waxaana ciidankooda ay ilaalo ka hayaan xarumaha muhiimka ah ee dowladda.
1-dii Janaayo ee sanadkan 2019 ayay aheyd markii dowladda Somalia ay dalka ka eriday Wakiilkii Qaramada Midoobey u qaabilsanaa Somalia Nicholas Haysom, isla markaana aan dalka laga rabin.